Salaad Maxamed Shardi (Darbi) | Somali Wiki
Home / Fanka / Salaad Maxamed Shardi (Darbi)
Posted by: Black in Fanka March 23, 2017	Comments Off on Salaad Maxamed Shardi (Darbi) 874 Views
Taariikhda dhalashada 1943
Goobta Dhalashada Burco
Gobolka Togdheer, Soomaaliya
· Salaad Maxamed Shardi (Salaad Darbi) waa fanaan caan ka ah Soomaalida dhexdeeda. Tan iyo 60-aadkii ayuu fanka kusoo jiray. Waa heesaa aad u cod macaan, oo marka uu ku luuqeynayo heesihiisa aad loogu raaxeysto codkiisa. Heeso aad u fara badan oo caan baxay ayuu Salaad qaaday.
· Salaad Darbi fanka meel dhexe ugama soo biirinee isaga oo aad u yar ayuu soo galay. Sida la sheego 13 jir ayay ahayd markii uu Salaad heesi jiray. 8 jirkiisii ayaa la sheegaa inuu lahaa oo lagu arkay astaamaha fannaanimada.
· Markii uu dhiganayay Dugsiga Qur’aanka ayay Salaad ardaydii ay isku dugsiga ahaayeen iyo macallinkiisaba wada qireen inuu marka uu Qur’aanka akhrinayo aad u cod macaanaa. Halkaas ayaana la sheegaa in cod macaanida Salaad markii ugu horreysay laga ogaaday.
· Salaad Darbi markii uu dhiganayay Kuleejada ayay ardaydii ay isku jiilka ahaayeen arkeen inuu cod faneed leeyahay, markaasey nin la sheego in la oran jiray Halawle, oo madax ka ahaa Kuleejada uu dhigan jiray Darbi, loo far muuqay. Waxaa lagu yiri “ardaygaas waxa uu ku fiican yahay fannaan, oo aad ayuu u cod macaan yahay”. Sidiibaa Salaad loo tijaabiyay, fankana uu ku soo galay.
· Markii ugu horeysay ee uu heeso waxa uu Salaad isaguba sheegaa inuu ka soo hor muuqday fagaaro loogu dabbaal degayay Maalinta Xornimada Soomaaliya ee 1-da Luulyo, halkaasoo uu joogay Madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya, Aadan Cabdulle Cusmaan (Aadan Cadde).
· Aad baa loogu riyaaqay, loolana dhacay codkiisa, dadkii halkaas joogayna ay ugu jadboodeen. Markaas waxaa la sheegaa inuu Salaad xitaa gaari kari waayay mikarafoonka, maadaama uu aad u yaraa. Halkaas ayuuna Salaad Darbi ku xaqiijiyay heesaanimadiisa.
Kadib, fanka ayuu sii dhex jibaaxay, ilaa uu ka qeyb qaato ruwaayado fara badan, isla markaana uu ku luuqeeyo heeso fara badan, oo jacayl iyo waddaniba lahaa. 
· Sida lagu naaneysba Salaad waxa uu sheegaa inuu magaca Darbi ugu baxay dhega-adeyg, oo waxaa sidaa iigu yiri jiray buu yiri macallinkeyga dugsiga.
· Salaad, waxa uu ka mid noqday fannaaniinta u carartay dalka bannaankiisa, markii uu Taliskii Militariga ahaa ee Siyaad Barre burburay kadib 1991-kii. Hase ahaatee, fanaanku illaa iyo hadda waa uu heesaa, ruwaayadaha la dhigana wuu ka qeyb qaataa, isaga oo jooga dalka dibaddiisa, halkaas oo uu heesa cusubna kasoo qaaday, ruwaayadana uu kusoo jilay.
§ 1960-aadkii, Salaad waxa uu u shaqeynayay Radio Muqdisho, halkaas oo ay isaga iyo koox kale oo fannaaniin iyo abwaanaba lahaa ay dadka uga maadeyn jireen, kana wacyigelin jireen, iyaga oo adeegsanaya suugaan.
§ Isla 1960-aadkii ayuu Salaad ka mid noqday Kooxdii Hobollada Waaberi ee la sameeyay markii la isku daray Kooxdii Waqooyi iyo kuwa Muqdisho.
§ Intii uu fannaanka ahaa Salaad, waxa uu sidoo kale ahaa xirfadle leh garaashyo baabuur, halkaas oo uu ka shaqeysan jiray.
§ Sida la sheego Fanka uma adeegsan jirin hab dhaqaalo ku-sameyn ah ee waxa ay ka ahayd hiwaayad uu aad u jeclaa, taasoo la sheego inuu aad uga duwanaa fannaaniin kale, oo ay isku waqti ahaayeen ama ka mid noqday kooxaha fannaaniinta ee ka jira dalka xiligii Taliskii Militariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre.
Heesihii Salaad Darbi
ü Beeni Raad Maleh
ü Ima Ogidee Waxaan Ahay
ü Ceel Buur
ü Ila Dadaal
ü Armaad Hoos u Noqotaa
ü God Baan Ku Dhacoo
Previous: Cumar Carte Qaalib
Next: Salaad Gabeyre Kediye